यूहन्ना १८:२०-२१ मा प्रभुको गहकिलो प्रत्युत्तरलाई विचार गर्नुहोस्। उहाँको भनाइको तात्पर्य यो थियो, “आफ्नै विरुद्धमा गवाही दिन म इन्कार गर्छु। व्यवस्थाबमोजिम तिमीहरूले साँचो साक्षीहरू खडा गराऊ।” यस न्यायोचित माग राख्‍नेबित्तिकै येशूले एउटा यहूदी अफिसरको हातबाट अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्‍यो जसले “येशूलाई...____________ लगायो” (यूहन्ना १८:२२)। त्यसले मुड्की पारेर होइन तर पाँच औंला फिँजाएर बेसरी थप्पड लगाएका थिए। त्यसपछिका घडीहरूमा येशूले त्यस्ता कैयौं पिटाइहरू सहनुपर्‍यो; योचाहिँ पहिलो थियो। यूहन्ना १८:२३ मा प्रभुले राख्‍नुभएको प्रश्‍नको जवाफ त्यस अफिसरले दिन सके होलान्? ____________। मानवजातिका लागि क्रूसमा मर्न जाने क्रममा उहाँ ज्यादै निर्मम शारीरिक यातनाहरू भोग्नलाई राजी हुनुपरेको थियो। प्रश्‍न उठ्छ, तपाईंचाहिँ मुक्ति पाउनलाई कत्तिको राजी हुनुहुन्छ?
क्रमश: - भाग २